Ladies နှင့်လူကြီးလူကောင်း .... Brace ကိုယ်ကိုကိုယ်။ သင်သည်မည်သည့်မတိုင်မီနှင့်မတူဘဲတစ်ပါတီတွေ့ကြုံခံစားဖို့အကြောင်းရှိပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့သတိပေးခဲ့ပါဘူးလို့ပြောမနေပါနဲ့။ ဒါဟာနှလုံးမှာမောဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ ပါတီ3...2အတွက်စတင်သည် ... 1 (ထုတ်လုပ်) "က Drop" - Djs, Vjs များအတွက် Nye နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ, နိုက်ကလပ် 2019
Home / DJ သမား drop XCHARX Ladies and gentlemenXCHARX. Brace yourselves. You are about to experienceaparty unlike any before. Don’t say we didn’t warn you. This is not for the faint at heart. Party starts in 3XCHARX2XCHARX1 “Drop it”(produced)
ဂုဏ်သရေရှိအမျိုးသားအမျိုးသမီးများခင်ဗျား…။ ကိုယ်ကိုကိုယ်ခါးကိုစီး။ သင်သည်မည်သည့်မတိုင်မီနှင့်မတူဘဲတစ်ပါတီတွေ့ကြုံခံစားဖို့အကြောင်းရှိပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့သတိပေးခဲ့ပါဘူးလို့ပြောမနေပါနဲ့။ ဒါဟာနှလုံးမှာမောဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ ပါတီ ...3...2အတွက် 1 စတင်သည် (ထုတ်လုပ်) "က Drop"
SKU: DJ သမား DROP 100 - #81 အမျိုးအစား: DJ သမား drop